Momba anay - Anhui Zhanyu Technology Co., Ltd.
ZHY acrylic dia natsangana tamin'ny taona 2000, mpanamboatra matihanina amin'ny vokatra akrilika izahay, miaraka amin'ny orinasa maherin'ny 5.000 metatra toradroa any Anhui, Sina. Manamboatra vokatra akrilika isan-karazany izahay, toy ny boaty voninkazo akrilika, boaty vatomamy akrilika, fiorenan'ny akrilika, fisehoana acrylic, mpikarakara makiazy akrilika, mpihazona fampirantiana akrilika, sns. Misy vokatra namboarina. Ny vokatray dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra maro manerantany, ny tsenanay lehibe dia Etazonia, Kanada, Aostralia, Alemana, Italia, United Kingdom, Netherlands, Bahrain, sns.
ZHY Acrylic dia mampifangaro ny famolavolana, ny famokarana ary ny varotra ho iray, ary miezaka ny ho mpitarika ny indostria mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny "kalitao voalohany, fahamendrehana aloha". Manana fitaovana manara-penitra isika, mpandraharaha mahay, injeniera efa za-draharaha ary fanaraha-maso kalitao hentitra mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra. Manana ekipa mpivarotra matihanina izahay hikarakara ny takian'ny mpanjifa rehetra amin'ny santionany, vokatra ary fandefasana sns. Mitazona ny masonay sy ny dingana amin'ny fampandrosoana ny tsenan'ny vokatra akrilika izahay ary manolo-tena amin'ny vokatra avo lenta sy serivisy lehibe hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa.
ZHY dia hiezaka ny tsara indrindra azontsika atao mba ho lasa orinasa OEM / ODM manara-penitra acrylic maoderina sy mpanamboatra iraisam-pirenena izay mirehareha amintsika ny mpiasa, afa-po amintsika ny mpanjifa ary miaiky anay ny sosialy. Inona no zava-dehibe indrindra tokony hataontsika mandray anjara amin'ny fiaraha-monina misy antsika. Ankehitriny izahay dia nanangana orinasa miaraka amina orinasa malaza maro amin'ny indostria isan-karazany, toa ny Sony Electron ho an'ny fitoeram-boky, Amway ho an'ireo mpihazona kosmetika, Nestle ho an'ny rakotra kafe Slatwall miaraka amina kafe misy latabatra, Master Card ho an'ny takelaka vavahady, Swarovski ho an'ny taratasy vita amin'ny akrilika sns.
Izahay dia mikendry ny hanome vahaolana tsara sy tsotra ho an'ny mpanjifa tsirairay, hamatsy entana avo lenta ara-potoana ary hanome serivisy tsara hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Izahay dia mandray tsara ny mpanjifa eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina amin'ny orinasanay mba hifampiraharaha amin'ny raharaham-barotra ary hikatsaka fomba handresena mba hiara-miasa.
Fako akrilika, Stand Acrylic Display, Boaty akrilika, Asehoy Acrylic Stand, Asehoy acrylic, Asehoy Acrylic Stand,